Fahfaahin ku saabsan Qarax ka dhacay Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya - Labo qof oo shacab ah ayaa ku dhaawacmey Qarax Miino, oo Maanta ka dhacay agagaarka Isgoyska Tarabuunka ee magaaladda Muqdisho, oo mudooyinkan dambe ay kusoo kordhayaan qaraxyada iyo dilalka.
Dad goobjoog ahaa oo la hadlay Keydmedia Online ayaa sheegay in bam la dhigay jidka hormara Isbitaalka DEVA uu qarxay xili halkaasi uu marayay Gaari nooca aan xabadda karin [Bulletbroof], kaasoo uu la socday mas'uul sare oo DF katirsan.
Bishan aan ku jirno Muqdisho waxay u tahay midii ugu qaraxyada badnaa sanadkan 2020, iyadoo maalin kahor weerar culus lagu qaadey Elite hotel oo Xeebta Liido ku yaalla, kaasoo lagu dilay 16 qof oo Mas'uuliyiin kamid yihiin.
Al-Shabaab ayaa u muuqata in iyadoo ka faa'idaysanaysa xiliga kala-guur, ay kordhisay weeraradeeda argagaxiso xili Kooxdan looga adkaadey dagaalladii ugu dambeeyay ay kula galeen Ciidanka Dowladda iyo AMISOM.
0 Comments Topics: alshabaab elite hotel liido qarax
Warar 29 November 2021 16:30